Ncell र NTC मा फोन व्यस्त हुँदा, फोन सम्पर्क नहुँदा, स्विच अफ हुँदा सुनिने आवाज कस्को हो (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौँ – हातमा मोबाईल नहुने ब्यक्ती कमै होलान । हामिले फोन गर्दा सुनिरहेकै एउटा आवाज छ, जुन सुनेर हामिलाई रिस पनि उठ्छ । कसै कसैलाई कौतुहलता पनि लाग्न सक्छ, आखिर यो बोल्ने ब्यक्ती को हुन । सधै हामिले फोन नेपाल टेलिकम, एनसेल सिममा फोन व्यस्त हुँदा , फोन सम्पर्क नहुँदा, स्विच अफ हुँदा वा कुनै कारणले सम्पर्क नहुँदा अथवा अन्य सेवा लिन खोज्दा फोनमा महिलाको स्वर बजेको त तपाइ हामी सबैले सुन्दै आएका छौ । उनीहरूले दिने रेकर्ड गरिएका सन्देश सुनेर हामीहरू धेरै प्रयोगकर्ताहरू झर्को मानेका हुन्छन् । तर केही मानिसहरूलाई उनीहरू को हुन्, कहाँका हुन् मनमा जिज्ञासा लागी रहेको हुन्छ । “तपाइले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ । केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोला ।
नेपाल टेलिकममा सुनिने आवाज कस्को हो ?
* अनुपा कर्माचार्य
यो आवाज नेपाल टेलिकममा सुनिने यो आवाज अनुपा कर्माचार्यको हो । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि सन्देश रेकर्ड गराउन कलाकारको खोजी गरेको थाहा पाएपछि उनले आफ्नो स्वर रेकर्ड गरेर पठाइन्। अरू केही कलाकारसँगै उनको स्वर पनि छानियो। उनै कर्माचार्यको स्वर अहिलेसम्म पनि बजिराखेको छ। अनुपमा कर्माचार्यले केही अन्य विज्ञापनमा पनि स्वर दिएकी छन्। हाल उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आबद्ध छिन्
* भूमिका थापा
यस्तै टेलिकममा बज्ने स्वरमध्ये भूमिका थापाको स्वर पनि हो। उनले रेकर्ड गराएको सन्देश बज्छ। भूमिका थापा पहिला रेडियो तथा टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्थिन् भने । भुमिका भन्छिन् फोन नलागेको बेलामा मेरै आवाज आउँछ, टेलिकम सम्बन्धी केही सुचना लिनुपर्ने भयो मैरै आवाज आउँछ । कतिपय अवस्थामा मेरो आवाज सुन्दा कतिजना दिक्क हुनुभएको हुन्छ । मैरै आमा पनि कहिले काहीँ भुमिका जी फोन लगाईदिनुहोस् न भनेर जिस्किनु हुन्छ मलाई मज्जा लाग्छ । कहिले काहीँ आफुले फोन गर्दा आफ्नै आवाज सुन्दा आफैलाई वाक्क लाग्ने गरेको भुमिकाको अनुभव छ ।
एनसेलमा बज्ने आवाज कस्को हो ?
* सुबानी मोक्तान
पछि सुरु भएको अर्को निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलका लागि सुबानी मोक्तानले पनि आफ्नो स्वर दिएकी छन्। सुबानी मोक्तान गायिका हुन् । एनसेलमा फोन गर्दा नलाग्ने समय वा अन्य सुचनाहरु लिनुपर्दा आफ्नो आवाज आउने बताउँदै सुबानी भन्छिन्, कहिले काँही म आफैपनि दिक्क भाको हुन्छु । सायद सबैलाई त्यस्तै हुन्छ होला । कहिले काँही आफैले कसैलाई फोन गर्दा आफ्नो आवाज सुन्दा वा इन्ट्रक्सन दिएको सुन्दा रममाइलो पनि लाग्छ तर नकाटे सम्म त्यही बजेको बजै गर्दा भने दिक्क नै लाग्छ उनी आफ्नै अनुभव सुनाउछिन् । बिबिसी नेपालीको सहयोगमा ।